Spain oo Xalay markale Quusisay France,
Loading...	Home Wararka Spain oo Xalay markale Quusisay France,
Spain oo Xalay markale Quusisay France,	Sunday, 24 June 2012 10:21	Xulka difaacanaya Koobka Qaramada Yurub ayaa xalay si fudud u dhaafay xulkii ku guuleystay Koobkan sanadkii 2000, ee France, kadib markii ciyaartii wareega 8-da ee Quarter Finalka looga badiyay Faransiiska 2-gool iyo waxba.
Spain oo wali muujineysa inay heyso awood ay ku difaacato koobkan ayaa xalay la soo shirtagtay xidigaheeda qatarta ahaa ee ku wanaagsanaa kubad sameynta, waxaana qeybtii hore ciyaarta ku bilaabatay dar dar xoog leh oo Faransiiska durba neefta lagu celiyay.
Daqiiqadii 19aad ee ciyaarta ayaa gool qurux badan waxaa Spain hogaanka ugu dhiibay Xabi Alonso, kaasoo ahaa kubad uu madax la helay oo uu goolhayaha Faransiiska si xoog leh uga dhex bixiyay.
Ciyaaryahan Alonso ayaa kulankiisa xalay u ahaa kii 100aad oo uu u safto, iyadoo kula dabaal degay guushii 14aad, isagoo u qaato Nambarka 14aad.
Spain ayaa inta badan Kubada maamuleysay qeybtii hore ee ciyaarta, waxaana qeybtii koowaad ay ku soo dhamaatay gool iyo waxba oo ay ku hogaaminayeen.
Qeybta labaad ayaa marka la isku soo laabtay ayaa Faransiiska isku dayay in waxooga wax ka bedelo, hase yeeshee uma suura gelin inay iska bar bareeyaan.
Dhamaadkii ciyaarta ayaa Rigoore loo dhigay waxaa gool u sarifay Xabi Alonso oo aad uga dhex muuqday xulkiisa oo uu ugu suura geliyay inuu Sema Finalka u soo saaro.
Spain ayaa ciyaarta Sema Finalka la balansan xulka Portugal oo horay uga soo badiyay Xulka Czech Republic.
Ciyaarta u dambeysa ee wareega 8-da oo la wada sugayo ayaa waxaa caawa fooda is daraya xulalka England iyo Italy, waxaana xulkii ka soo baxa ciyaarta Sema Finalka la ciyaaraya, xulka Jarmalka oo Koobkan loo saadaalinayo,markii habeen hore 4-2 uga badiyeen Greece